Golaha Aqalka Sare oo ku baaqay in loo gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay – Kalfadhi
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka dalka ayaa ku baaqan in loo gurmado dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ku nafwaayeen in ka badan 20 ruux, ayna ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan. Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha, Mowliid Xuseen, oo shir-gudoominayey kulanka Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka Sare ayaa, isaga oo warbaahinta la hadalayey, xusay inuu Goluhu kaalinta ugu horreysa uu qaadan doono.
“Anigoo ku hadlaya magaca Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya intii ku dhimatay qaraxaasi Alle ha u naxariisto, inta dhaawaca ah ee ku jirta Isbitaalladana waxaan lee yahay Illaahay ha caafiyo. Waxaan ugu baaqayaa Ummadda Soomaaliyeed, Xukumadda Federaalka Iyo Baarlamaanka oo uu Aqalka Sare uu ugu horreeyo, ha loo gurmaddo dadka dhibtu ay soo gaartay” ayuu yiri Guddoomiye Mowliid.
Kulanka Guddiga Joogtada ah ee Golaha ayaa ku saabsanaa labo arrimood oo kaliya, kuwaas oo kala ahaa dhageysiga daraasad la xiriirta Hanaanka Federaaka iyo dowrka Aqalka Sare ee ilaalinta danaha Dowlad Goboleedyada iyo ajandeynta kulanka 13-aad ee Golaha, oo dhici doona todobaadka soo socda.
Senator Cabdi Kaafi Macali Xassan, oo ah Hab-dhowraha Golaha Aqalka Sare oo la hadlay Warbaahinta Markii uu soo dhamaaday kulankooda, ayaa sheegay in Xildhibaannadu ay diiradda saareen dhageysiga daraasadda ay qubaradu soo diyaariyeen, si ay wax uga fahamaan Hanaanka Federaalka iyo shaqada Golaha Aqalka Sare.
“Waxaan dhageysaneynay sharci-yaaqannada Aqalka Sare, maadaama Aqalka Sare uu ku cusub yahay Ummadda Soomaaliyeed, dasduurkana uu meela isaga hor-imaanayo, kaas oo daraasad ay kasoo sameeyeen dowrka Aqalka Sare ee Maamul Goboleedyada” ayuu yiri Habdhowraha Golaha Aqalka Sare.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo maanta la kulmay Guddiga Maaliyadda ee Golaha